पाठेघर मुखको क्यान्सरसम्बन्धी सचेतनामा जोड दिदैं नेपाल क्यान्सर अस्पताल
काठमाडौं - हरेक बर्ष जनवरी महिनालाई महिलाको पाठेघर मुखको क्यान्सर सचेतना महिनाको रुपमा लिइन्छ । यस बर्ष पनि ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालले विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम गरि पाठेघर मुखको क्यान्सर सचेतना महिनाका रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।
नेपाल तथा अन्य विकासोन्मुख देशका महिलाहरुमा देखिएका क्यान्सरहरुमध्ये पाठेघर मुखको क्यान्सर प्रमुख रहेको छ । अज्ञानता, समयमा उपचार नर्दा र समयमै क्यान्सर रोगको पहिचान गरे निको हुन्छ भन्ने ज्ञानको कमी हुनुका साथै महिलाको स्वास्थ्यलाई न्युन प्राथामिकता दिनाले पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट बर्षेनी थुप्रै महिलाहरुको मृत्यु भइरहेको छ । विभिन्न अनुसन्धानहरुका अनुसार ९९ प्रतिशत पाठेघर मुखको क्यान्सरमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपिभि) भाइरसको संक्रमणले भएको पाइएको छ ।
पाठेघर मुखको क्यान्सरको प्रमुख कारण ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको संक्रमण हो । ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको सुंक्रमण हुनु सामान्य हो । यो यौन सम्पर्कद्धारा सर्छ । यो संक्रमण उपचार नगरिकन हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले निको पारिदिन्छ । तर यो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको संक्रमण भएको लामो समयसम्म शरीरको प्रतिरक्षा प्रणलीले यसलाई हटाउन नसकेमा पाठेघर मुखको क्यान्सर हुने सम्भाबना बढ्छ ।
पाठेघर मुखको क्यान्सर समयमा पत्ता लगाउनका लागी नियमित परिक्षण गराउनुपर्छ ।
गर्भाशयको श्राव परिक्षण (प्याप स्मेर)
पाठेघर मुखको श्राव परिक्षणले असामान्य कोषिकाहरुलाई पत्ता लगाउने भएकाले क्यान्सर हुनु अघि नै उपचार गर्न सकिन्छ ।
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको परिक्षण
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको परिक्षणले एचपिभि डिएनए परिक्षणले क्यान्सर गराउने भाइरस पाठेघरको मुखमा भए नभएको निक्र्योल गर्दछ । जसबाट क्यान्सर हुन सक्ने सम्भाबनाबारे पुर्व ज्ञान हुनेछ ।
३० बर्ष भन्दा मुनिका महिलाहरुले एचपिभि डिएनए परिक्षण गराउँन जरुरी छैन । यदि २१ बर्ष पुगेको महिला विवाहित भएमा हरेक ३ बर्षको अन्तरालमा प्याप स्मेर परिक्षण गराउनुपर्छ । ३० बर्ष पुगेपछि प्याप स्मेर परिक्षणसँगै एचपिभि डिएनए परिक्षण पनि गराउन जरुरी हुन्छ । नियमित जाँच र खोपबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ ।
विश्वमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस बिरुद्ध खोप
हालसम्म १३० प्रकारका एचपिभि पत्ता लागिसकेका छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत पाठेघर मुखको क्यान्सर आठ प्रकारका एचपिभि १६, १८, ३१, ३३, ३५, ४५, ५२ र ५८ बाट हुने देखिएको छ । जसमध्ये एचपिभि १६ र १८ प्रकारको संक्रमण बढि जोखिमपुर्ण भएको मानिन्छ । हाल एचपिभि भाइरस बिरुद्धको खोप पत्ता लागिसकेको छ ।
संसारभरी १३४ देशमा यो खोप आधिकारिक रुपमा उपलब्ध छ । भने ८७ देशमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । अष्टे्रलियामा हालसम्म ८०.१ बालिकाहरु र ७४.१ बालकहरुमा पुर्ण खोप लगाइएको छ । उनिहरु विश्वकै प्रथम पाठेघर मुखको क्यान्सर मुक्त राष्ट्र बन्ने प्रयासमा छन् ।
लगातार एचपिभिको संक्रमण वढी हुने सम्भावना कसलाई हुन्छ ?
कलिलै उमेरमा विवाह भएका महिलाहरुमा
कम उमेरमा नै यौन सम्पर्कमा सक्रिय हुने महिलाहरुमा
एक भन्दा धेरै पुरुषसंग सम्पर्क राख्ने महिलाहरुमा
धेरै सन्तान जन्माउने महिलाहरुमा
प्रतिरक्षा प्रणालीे (रोगसंग लड्ने क्षमता) कमजोर भएका महिलाहरुमा
धुम्रपान गर्ने महिलाहरुमा
अरु यौन सम्पर्कद्धारा सर्ने रोग लागेमा
यी महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने वढी सम्भावना देखिन्छ ।
एचपिभि बिरुद्धको खोपहरु
विभिन्न प्रकारका एचपिभि बिरुद्धको खोपहरु उपलब्ध छन् ।
Cevarix : Bivalent Vaccine
Gardasil : Quadrivalent Vaccine
यस खोपले दुई प्रकारको भाईरस टाईप १६ र १८ बिरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ । टाईप १६ र १८ विश्वमा ७० प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सरको कारकहरु हुन् । त्यसैले यो खोप लगाएमा ७० प्रतिशतले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर अरु प्रकारको एचपिभि भाईरसले गर्दछ । त्यसैले एचपिभि विरुद्वको खोप लगाउँदैमा १०० प्रतिशत सुरक्षा हुँदैन । खोप लगाएता पनि नियमित रुपले परीक्षण अनिवार्य गराउनु पर्दछ ।
यो खोप कसका लागि प्रभावकारी हुन्छ ?
९–२६ उमेरका सबै महिलामा
यौन जीवनमा आबद्ध नभएका किशोरीहरुमा
९–१४ वर्षलाई दुई पटक मात्र लगाए पुग्छ
१५–२६ वर्षका लागि तीन पटक लगाइन्छ